कुनै युवतीलाई मन पराउनुहुन्छ ? यसरी माग्नुहोस् फोन नम्बर
कोही केटाहरू लजालु किसिमका हुन्छन् र मनको कुरा कसैसँग शेयर गर्दैनन् । अलि फरवार्ड खालका केटाहरू त पहिलो भेटमै केटीको नम्बर हात पार्न सफल हुन्छन् । तर केटीहरूले कहाँ सजिलै नम्बर दिन्छन् र ? यहाँ दिइएका केही टिप्स अपनाउनुभयो भने केटीले नम्बर दिन हिचकिचाउँदैनन् ।
केटीको नम्बर माग्नुअघि पहिला उसको विश्वास र भरोसा जित्नुस् । हतार गर्नुभन्दा बिस्तारै विश्वास जित्नुपर्छ ।
एकोहोरो लागेर पछ्याउने केटालाई केटीहरू मन पराउँदैनन् । हतारो गर्ने केटाहरू यसरी केटी पछ्याउँछन् । त्यसैले बिस्तारै मन जित्नुपर्छ, झुण्डिन खोज्नु हुँदैन ।
३ साथीको मद्दत नलिने
केटीको नम्बर पाउनका लागि साथीहरूको मद्दत लिन खोज्नुभयो भने तपाईंको छवि खराब हुन पुग्छ ।
४ झुटो नबोल्ने
केटाहरूले झुटो बोलेर केटीको नम्बर माग्छन् तर उनीहरूको झुट खुलिहाल्छ । साँचो बोल्दा नै केटीको विश्वास जित्न सकिन्छ ।